Huawei | ဆိုင်မွန်စာကြည့်ဆိုဒ်
Che1-CL20 Android 4.4 Emotion UI 3.0 V100R001CHNC00B277
Honor Che1-CL20 Firmware တောင်းထားတဲ့ ညီလေး အတွက် တင်ပေး လိုက်ပါတယ်။
အီးမေးကနေ တောင်းထားတဲ့ သူများနဲ့ အတူ လိုအပ်တဲ့ သူတွေလည်း အားလုံး အောက်ကလင့် ကနေ Download ရယူ လိုက်ပါ။
Lastest Buildnumber 277 ပါ။
▼ Honor Che1-CL20 B277 EMUI 3.0 ▼
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Saturday, September 19, 2015 1 comment:
ကဏ္ဍ Android, Firmware, Honor, Huawei
G510 (T8951, Android 4.0, V100R001CHNC01B207)
Huawei G510 ( T8951 ) အတွက် B206 တောင်းထားတဲ့ အကို တစ်ယောက် အတွက် Lastest ထွက်ထားတဲ့ B207 လေး တင်ပေးလိုက် ပါတယ် ခင်ဗျာ။
တောင်းဆို ထားတဲ့ အကိုနဲ့ အတူ လိုအပ်သူများ ရှိရင် အောက်က လင့်ကနေ Download ရယူ လိုက်ပါ ခင်ဗျာ။
>>>>> Download Here Huawei G510 ( T8951 V100R001CHNC01B207 ) <<<<<
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Wednesday, September 16, 20152comments:
ကဏ္ဍ Android, Firmware, Huawei
Step by Step ROOT For Huawei P8
Huawei P8 ကိုင်ဆောင်သူတွေအတွက် Root လုပ်နည်းလေးကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
အရင်ဆုံး Root လုပ်နိုင်ရန် ဖုန်းကို Bootloader unlock လုပ်ပေး ရပါမယ်။
အရင်ဆုံး Bootloader unlock code တောင်းလိုက်ပါ။ Bootloader unlock code တောင်းဆိုရန် ဖုန်းရဲ့ IMEI / SN / Product ID တို့ကို Huawei company သို့ Mail ကနေ တစ်ဆင့် ပို့ပေးရ ပါမယ်။
အောက်ကစာလေးတွေ အတိုင်း mobile@huawei.com ကို Mail ပို့ ပေးလိုက်ပါ။
I’d like to requestabootloader unlock code for my Huawei device.
Product: HUAWEI model name
Huawei ကနေ တစ်ဆင့် unlock code လေး ကိုယ့် Mail ထဲကို ပို့လာပြီ ဆိုရင်တော့ Adb command လေးနဲ Bootloader unlock လုပ်ကြတာပေါ့ :)
ADB Folder လေးကို ဖွင့်လိုက်ပြီး Shift + Right Click လေး နှိပ်လိုက်ပါ။
ပြီးရင်တော့ Open Command window here ပေါ့…….
ပြီးရင်တော့ ဖုန်းကို Fastboot mode လေး ခေါ်လိုက်ပါ။ Fastboot mode ခေါ်ရန် အောက်က key လေးတွေ အတိုင်း ဖုန်းမှာ နှိပ်ပေးလိုက်ပါ။
Fastboot mode >>> Volume down + Volume up + Power
ပြီးရင်တော့ ဖုန်းနဲ့ computer ကို ချိတ်ဆက် ပေးလိုက်ပါ။ computer ကနေ ဖုန်းကို usb သိတယ် ဆိုရင်တော့ ADB command လေးကို သွားလိုက်ပါ။
Command box လေးမှာ အရင်ဆုံး adb devices ဆိုတာလေး ရိုက်ပြီး enter နှိပ်လိုက်ပါ။
အပေါ်က စာတန်းလေး အတိုင်းပြတယ် ဆိုရင် adb ကနေ ဖုန်းကို သိရှိပြီ jဖစ်တာကြောင့် ဆက်ပြီး လုပ်ဆောင် နိုင်ပါတယ်။
နောက် တစ်ဆင့် မှာတော့ အောက်က စာတန်းလေး အတိုင်း ရိုက်ရ ပါမယ်။
- fastboot oem unlock 123456xxxxxxx
unlock ရဲ့အနောက် ကတော့ ကိုယ့် Mail ထဲကို ပို့ထားတဲ့ Bootloader unlock code ကို ထည့်ရမှာပါ။
ပြီးရင်တော့ enter လေးနှိပ်လိုက်ပါ။
Command box မှာ အလုပ် ဆက်လုပ် ပေးပါမယ်။ Finish ပြပြီ ဆိုရင်တော့ Bootloader unlock လုပ်ခြင်း ပြီးဆုံးပါပြီ။
Command box မှာ fastboot reboot လို့ရိုက်ပြီး ဖုန်းကို reboot ချလိုက်ပါ။
နောက်တစ်ဆင့် အနေနဲ့ကတော့ ဖုန်းကို Custom recovery သွင်းပေး ရမှာပါ။
လိုအပ်တဲ့ data လေးကို အောက်ကလင့်မှာ အရင် Download ရယူလိုက်ပါ။
▼ P8 Clockwork mod Revocery ကို ဒီမှာ နှိပ်ပြီး ဒေါင်းယူပါ ▼
Down လို့ ရလာတဲ့ cwm-p8-nogui.img လေးကို ADB Folder ထဲ ထည့်လိုက်ပါ။
ပြီးရင် Shift + Right Click နှိပ် Open command window here ကိုရွေးပြီး command box ကို ပြန်ခေါ်လိုက်ပါ။ ဖုန်းကို Fastboot mode ပြန်သွင်း လိုက်ပါ။
adb devices လို့ရိုက် enter ခေါက်ပြီး command box ကနေ ဖုန်းကို သိ မသိ ပြန်စစ် လိုက်ပါ။ ဖုန်းကို သိတယ် ဆိုရင်တော့ အောက်က command လေးကို ထပ်ရိုက်ပါ။
– fastboot flash recovery cwm-p8-nogui.img
command ရိုက်ပြီး ရင်တော့ enter လေး ခေါက်လိုက်ပါ။ Command box မှာ အလုပ်လုပ်ပြီး Finish ပြပါ လိမ့်မယ်။ ဒါဆိုရင်တော့ ဖုန်းကို custom recovery သွင်း
ပြီးရင်တော့ fastboot reboot လေးရိုက်လိုက်ပြီး ဖုန်းကို reboot ချပေး လိုက်ပါ။
ဖုန်းမှာ power ပြန်တက် လာရင်တော့ USB Debugging တို့ Unknow source တို့ကို on ပေးပြီး iRoot (သို့မဟုတ်) Root Tool တစ်ခုခုနဲ့ Root ဖောက် ပေးလိုက်ပါ။
Original link - http://www.myanmarmobileapp.com/2015/08/10/step-by-step-root-for-huawei-p8/
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Monday, August 10, 20153comments:
ကဏ္ဍ Android, Huawei, Root, ဖုန်းနည်းပညာ, လမ်းညွှန်
Huawei G620s-UL00 B248 ကို Root လုပ်ခြင်း
Huawei G620s-UL00 ရဲ့ Buildnumber 248 ကို Root ချင်လို့ မေးထားတဲ့ အကိုနဲ့ အတူ လိုအပ် သူများ အတွက် ပြန်လည် မျှဝေပေး လိုက်ပါတယ်။
အရင်ဆုံး လိုအပ်တာလေးကို ဒေါင်းယူလိုက်ပါ။
HUAWEI G620S-UL00 B248 insecure boot.rar Upload Ko Mg Thu ( Credit )
Down ပြီးရင်တော့ အရင်ဆုံး Bootloader unlock လုပ်ပေး ရပါမယ်။
Bootloader unlock လုပ်ရင် ဖုန်းက data တွေအကုန် ပျက်ပါမယ်။ ဒါကြောင့် data တွေကို Backup လုပ်ပေး ထားပါ။
Bootloader unlock လုပ်ပြီး ရင်တော့ Down လို့ရတဲ့ insecure boot လေးကို adb command ကနေ Flash ပေးလိုက်ပါ။
ပြီးရင်တော့ iRoot ဒါမှမပာုတ် Root Tool တစ်ခုခုနဲ့ Root လုပ်နိုင်ပါပြီ။
Original recovery လေး ပြန်ထည့် ချင်ရင်တော့ ဒါလေးကို Download ရယူပြီး adb command ကနေ ထည့်လိုက်ပါ။
Download : G620S-UL00 B248 boot.rar
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Friday, July 10, 20157comments:
ကဏ္ဍ Android, Huawei, Root
Huawei ဖုန်း များ မြန်မာ font ထည့်သွင်း ပေးမည့် Emotion UI Fonts Installer
Description - Softwar အညွန်း
Emotion UI ပါရှိသော ဖုန်းများ ဖြစ်သော Huawei ဖုန်း အများစုတွင် Root Access မလိုပဲ မိမိ နှစ်သက်သော ဖောင့် Style ထည့်သွင်း နိုင်အောင် ပြုလုပ် ထားခြင်း ဖြစ်သည်။
မိမိ ဖုန်းတွင် Frozenkeyboard မပါရှိ ပါက Auto သွင်းပေး နိုင်အောင် ထည့်သွင်း ထားသည်။
မိမိ ဖုန်းနှင့် Support မပေး ပါက ထည့်သွင်းခွင့် ရှိမည် မဟုတ်ပါ။
မိမိ ဖုန်းနှင့် ကိုက်ညီသော Font ဟုတ် မဟုတ် စမ်းသပ်ပြီးမှ ထည့်သွင်း နိုင်အောင် စီမံပေး ထားသည်။
မိမိ ဖုန်း အတွင်း ထည့်သွင်း တော့မည် ဆိုပါက Install ကို နှိပ် လိုက်ပါ။
ပြီးရင် CUSTOMIZE CURRENT Theme ကိုနှိပ်ပါ။
မိမိ ထည့်သွင်း ထားသော Font နာမည်ကို Apply လုပ်ပေးပါ။
ဒီ App ကို MMSD မှ Free အနေဖြင့် ရေးသားဖြန့်ဝေပေး လိုက် ပါတယ်။
Not Support Error In Huawei EUI Devices
- Ubuntu Zawgyi Font Style
- Iphone Zawgyi Font Style
- Dance Zawgyi (Support G730U-00 & Other Devices)
- Ghost Zawgyi (Support G730U-00 & Other Devices)
- CL Metrix (Support G730U-00 & Other Devices)
- Tharlon Zawgyi (Support G730U-00 & Other Devices)
ဖောင့်အားလုံးကို ဖုန်းအားလုံး ကိုက်ညီအောင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ပေးထားပါသည်။
Credit To All Font Creator!
Credit To Icon Design Han Zaw OO
Developed By Phyo Chan.
My Facebook - https://www.facebook.com/phyo.chan.12
My Website - http://myanmarmobilesoftwaredeveloper.com/
Dance Zawgyi (Support G730U-00 & Other Devices)
Ghost Zawgyi (Support G730U-00 & Other Devices)
CL Metrix (Support G730U-00 & Other Devices)
Tharlon Zawgyi (Support G730U-00 & Other Devices)
▼ play.google.com ▼ OR ▼ zippyshare.com ▼
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Wednesday, April 22, 2015 1 comment:
ကဏ္ဍ Android, Huawei, Phone Application, မြန်မာဖေါင့်
Huawei G730-U00 အတွက် Colour OS
Huawei G730-U00 အတွက် Colour OS ကို ပြန်လည် မျှဝေပေး လိုက်ပါတယ်။
အရောင် အသွေး လှပ စုံလင်ပြီး လှပမှု ရှိတာကြောင့် ကြိုက်နှစ်သက် သူများ နှင့် လိုအပ်မှု ရှိသူ အားလုံး အလွယ် တကူ Download ရယူနိုင်ရန် Share ပေး လိုက်ပါတယ်။
အသုံးပြုချင်သူများ အောက်ကလင့်မှာ ဒေါင်းယူ နိုင်ပါတယ်။
▼ Download Huawei G730-U00 အတွက် Colour OS ▼
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Saturday, April 04, 20154comments:
ကဏ္ဍ Huawei, Phone Application
Huawei G6-U10 ဖုန်းများကို ကွန်ပျူတာ မလိုပဲ One Click နဲ့ တင် Root ဖောက်လို့ ရပါပြီခင်ဗျား
G6-U10 ကို Vroot နဲ့ မပေါက်ပါ towelroot.apk လေးနဲ့ တော့ လုံးဝ OK ပါတယ်။
ပထမဆုံး သင့်ဖုန်းမှာ Setting > Unknow Source> ON ထားပေးပါ။
Root လုပ်ဖို့ရန် အတွက် towelroot.apk လေးကို အောက်က လင့်မှာ ဒေါင်းလော့ ရယူ လိုက်ပါ။
▼ towelroot.com ▼ OR ▼ zippyshare.com ▼ OR ▼ usersfiles.com ▼
towelroot.apk နဲ့ ဖုန်းမှာ တင် One Click နဲ့ Root လုပ်နည်း Method ကို အောက်က လင့်မှာ ၀င်လေ့လာ ကြည့်ပါ။
မည်သည့် ဖုန်း မဆို 4.2.2 အထက် အားလုံး One Click နဲ့ Root အလွယ် လုပ်နည်း
မြန်မာစာ အတွက် ကတော့ MMSD မှ Font Changer လေးနဲ့ အဆင်ပြေ ပါတယ်၊
မူရင်းပိုစ့် - Loading Loading Loading
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Sunday, March 15, 2015 No comments:
ကဏ္ဍ Android, Huawei, Phone Application, Root